War deg deg ah:Akhri Qodoba Shan ah oo ay ku heshiiyeen Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib wada hadal waqti dheer qatay	| Salaan Media
War deg deg ah:Akhri Qodoba Shan ah oo ay ku heshiiyeen Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib wada hadal waqti dheer qatay
Nairobi, 05 June 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamud iyo Madaxweynaha dalka Kenya, Hon. Uhuru Kenyatta ayaa muddo labo cisho ah wada hadal ku yeeshey xarunta Madaxtooyada Nagana ee gobolka Nyere ee dalka Kenya.
Kulankan labada madaxweyne ayaa daba socdo kulankii ugu danbeeyey ee labada madaxweyne ay ku yeesheen Addis Ababa 28kii May iyo kii ka horeeeyey ee Mombasa. Labada Madaxweyne ayaa muddo labo casho ah ka wada hadlayey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal, arrimaha amniga, qaxootiga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Ugu danbeyntii labada madaxweyna ayaa isla gartay arrimahan:
1. In Shir caalami ah lagu qabto Kenya bisha August oo ay wada shir guddoominayaan Soomaaliya, Kenya iyo Qaramada Midoobey si xal loogu helo dib u celinta qaxootiga Soomaaliya ee ku sugan Kenya. Labada madaxweyne waxey hoosta ka xariiqeen in dib u celinta qaxootiga la waafajiyo shuruucda caalamiga ah oo dhammaan qaxootiga Soomaalida ay helaan xaquuqdooda muhiimka ah si ay dib u dhiska dalka uga qeyb qaataan.
2. In labada dal ay sameystaan guddi wadajir ah oo ka shaqeeya sidii loo hirgelin lahaa dhammaan qodobada lagu heshiiyey.
3. In labada dal ay iska kaashadaan soo celinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah.
4. In dowladda Kenya ay u fidiso shaqaalaha dowladda tababar lagu kobcinayo tayada iyo waayo aragnimada shaqada si dowladda Soomaaliya ay ugu sahlanaato hirgelinta maamul wanaaga.
5. Iyo in labada Madaxweyne ay sii wadaan wadahadalkooda oo ay si joogta ah u kulmaan.
Xafiiska Shabakadda Salaanmedia